Jery taratra… herinandro: tsy misy izay tena fitoniana… | NewsMada
“Fifidianana solombavambahoaka, hifanentana amin’ny fanamby ve?”, hoy ny fanambaran’ny Sefafi. “Asa na fanahy iniana na tsia fa tsy mahatontosa ny andraikiny ny solombavambahoaka. Zavatra hafa tanteraka ny ataony mba hahatsara azy eo imason’ny mpifidy, na mba hitangosana tombontsoa manokana: tsy anjarany ny manamboatra ny lalana (…). Tsy misy ifandraisany velively amin’ny asan’ny solombavambahoaka ireny asan’ny mpanao ronono an-tavy ireny.”
Na efa samy niteny sy nampitandrina aza, ohatra, ny HCC sy ny Ceni ny amin’ny fisian’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana: mitohy ny fanaovan’ny kandidà sasany fampielezan-kevitra mivantana: famoriana olona, fampahafantarana miendrika dokambarotra amin’ny haino aman-jery, fametrahana peta-drindrina misy laharan’ny kandidà… Tsy misy izay fampiharan-dalàna sy fanenjehana ny amin’izany.
Misy ny fangatahana fivoriana tsy ara-potoana hanovana ny birao maharitra eny anivon’ny Antenimierandoholona. Tsy azo ifampiresahana ny filoha, raha ny fitarainan’ireo loholona HVM sasany. Efa any amin’ny fahefana mpanatanteraka izay fangatahana izay ka andrasana izay ho valiny. Nilaza ny filoha fa tombontsoa manokana no anonganana ny birao maharitra ary izy no tena kendrena amin’izany.
Tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra fa hojerena ny fitantanana ny mpiasam-panjakana miisa 215 629 amin’izao: hajanona, ohatra, izay tsy ilaina, hanaovana tolotr’asa ny toerana banga… Nambaran’ny praiminisitra fa hampidirina ao anatin’ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana, taona 2019, ny ampahany amin’ny fitakian’ny sendikàn’ny mpampianatra mpikaroka (Seces).
Na eo aza ny ezaka fampanjakana ny fandriampahalemana, mbola tsy mahafa-bela ny asan-jiolahy. Amin’izao fetin’ny Paska izao, polisy 3 000 mahery no hitandro filaminana. Ho hentitra amin’ny fampanajana ny fitsipika amin’izany. Eo ny fanabeazana ny olom-pirenena hanaja lalàna, ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ary ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Misy izay hoe fitoniana amin’izao Paska izao?